Soomaaliya, 01 December 2018
Hargeysa: Xuska Maalinta HIV/AIDS
Somaliland ayaa ka mid ahayd meelihii dadka lagaga wacyigeliyay xanuunkan, halkaas oo dadka xanuunkani uu haleelay ay ka cabanayaan takoor lagu hayo, kuwaas oo qaarkood faquuqa lagu hayaa uu u gudbay ubadkooda.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee tooddobaadka waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo ku saabsan Somalia oo uu ugu weyn yahay muranka ku saabsan kala dirista Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Somalia
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo u dirtay Baydhabo
Ciidamo boolis ah oo ay dowladda federalka Soomaaliya kasoo dirtay Muqdisho ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo.
Faaqidaadda: Kala dirista guddiga maaliyadda baarlamanka
Askari lagu dilay weerar ka dhacay Boosaaso
Hal askari ayaa ku dhintay laba kale iyo qof shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen, kadib markii weraar qarax iyo rasaas isugu jira habeenimadii xalay ay rag hubaysan ku qaadeen ciidamo ka tirsan booliska Gobolka Bari, magaalada Boosaaso.
Howl-gallo ka dhan ah Shabaab oo ka socda Sh/Hoose
Maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dawladda ayaa hawl-gallo ka waday degaan u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Marka kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab laga soo riixay dhinaca magaalada Marka.
Waddani oo diiday in doorashada la dhaafiyo 2019
Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa dib-u-dhaca doorashooyinka Somaliland ku tilmaamay masuuliyadda xukuumadda, waxaanu sheegay in xisbi ahaan aanay qayb ka ahayn masuuliyadda baaqashada, oo ay hore ugu eedeeyeen guddida doorashadu.
Bandhigga VOA: Dagaaladii 1-aad iyo 2-aad ee dunida
C/llaahi Maxamed: Guddiga maaliyadda lama kala diri karo
Guddiga maaliyadda baarlamanka oo la kala diray
Guddoonka baarlamanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegay inuu kala diray guddigii Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorsheynta iyo la-Xisaabtanka ee baarlamanka.